अर्थ – Nayadhar
पाल्पा । लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा फेरि बढेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेसँगै लामो दूरीका सवारीसाधनको भाडादर बढेको हो। वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा भाडा बढाउने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै मंगलबारबाट लागू हुने गरी भाडादर बृद्धि भएको जनाएको छ । विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीमा २.१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २.७ प्रतिशत, तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने ...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योग र उत्पादन विशेष प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले विषेश जोड दिएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्र पनि सरकारको नीति तथ का...
पाल्पा । आज (मंगलबार)संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै छ । मंगलबार ४ बजे बस्ने सो बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । हरेक निकाय तथा मन्त्रालयहरुले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत गरिरहेको छ । आजदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छल...
तानसेन। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पाल्पाले आजदेखि सेवा बन्द गरेको छ । विशालबजार र असनटोलमा भाडामा रहेका यी दुई कार्यालयले कार्यालय स्थानान्तरणका लागि एकहप्ता सेवा बन्द गर्ने भएका हुन् । सूचना जारी गर्दै मालपोत र नापीको एकीकृत कार्यालय घरेलु कार्यालयसँगै निर्माण सम्पन्न भएकोले कार्यालय स्थानान्तरणको लागि सेवा बन्द गर्नुपरेको मालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख विष्णु खनालले जानकारी दिए । मालपोतले ८ गते सूचना जारी गरेर ११ देखि १६ गतेसम्म कार्यालयको श्रेस्ता, लिखत लगायत...
तानसेन। सरकारले प्रत्येक १०।१० वर्षमा गर्दै आएको कृषि गणना पाल्पामा पनि सुरु भएको छ। सातौं कृषि गणना अन्तरगत जिल्लाका दश स्थानीय तहमा कृषि सम्बन्धि गणना गर्नका लागि ६१ जना गणक र १६ जना सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । जिल्लाभर गरी एक सय ६४ क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि सुरु गरिएको कृषि गणना अधिकृत भविश्वर घिमिरेले जानकारी दिए । दश स्थानीय तहका ८० वटा वडा मध्ये तानसेन नगरभित्रका ४ वटा बाहेक सबै वडामा कृषि गणना गरिने पनि अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । जस अनुसार रामपुरमा २०, तानसेनमा १...
काठमाडाैं। सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित रु तीन करोड ९५ लाख ३३ हजार ६०० बराबरका तीन लाख ९५ हजार ३३६ कित्ता साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो । कम्पनीले कूल निष्काशनमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ७६६ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोष र जारी पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् छ हजार ८२ कित्ता कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहने त...
तानसेन। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको सङ्गमस्थल रुरु क्षेत्र धाम रिडीमा दश दिने कृषि, पर्यटन तथा सास्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ । बिहीबार समुद्घाटन भएको महोत्सव आगामी चैत्र २७ गतेसम्म चल्ने आयोजक संस्था अर्गली जनचेतना युवा मञ्चले जनाएको छ । युवा क्लव र तानसेन नगरपालिकाको वडा नं. १४ को सहयोगमा सुरु गरिएको महोत्सवको लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले समुद्घाटन गरेकी हुन् । महोत्सवमा स्थानीय कला, सस्कृतिको संरक्षण गर्नुका साथै स...
बुद्धको सन्देशलाई विश्वभर फैलाउँन सके पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना
तानसेन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बुद्धको सन्देशलाई विश्वभर फैलाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार पाल्पाको तानसेनमा तानसेन नगरपालिका र लुम्बिनी गार्डेन फाउण्डेसन, स्पेनबीच भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर बार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विश्वले बुद्ध जन्मेको देश भनेको चिनेको मुलुक भएका कारण पनि हामीले त्यसबाट फाइदा लिन नसकेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आर्थिक विकास, मानवीय विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा नेपाललाई चिन...
तानसेन। पाल्पा जिल्लालाई ढाका राजधानी घोषणा गरिएको छ । विश्वभर पाल्पाली ढाकाको बढ्दो महत्वलाई सार्थकता दिन राजधानी घोषणा गरिएको पाल्पाली ढाका संघले जनाएको छ । तानसेनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको हो । राजधानी घोषणा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश कानुन, महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले ढाका राजधानीको पाल्पा जिल्ला ऐतिहासिक र सांस्किृतिक स्थल रहेको बताउदै यहाँ उत्पादित ढाकालाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारसम्म पहिचान पुर्याउन राजधानी घोषण...
बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य!
काठमाडाैं। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले डिजेल पेट्रोल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर रु ५ बढाएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै नेपाल आयल निगमले बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो। हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ। आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २०० डलर वृद्धि भएको छ। यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ । निगमले केहीअघि मात्रै पेट्रोलि...